कसले के पढे(पाठक समिक्षा)- निर्वेद केलाउँदै नारायण काँईलो
१० महिना अगाडि १० महिना अगाडि Abinash Thapa	0 Comments उपन्यास, गजलकार, नारायण काइलो, निर्वेद केलाउँदै नारायण काईलो
नेपाली साहित्यका विभिन्न हस्तिहरु तथा नेपाली साहित्यप्रेमिहरु अरु लेखकका पुस्तक कतिको पढ्छन कस्ता पुस्तक राजार्इ मा पर्छन भन्ने जान्नको लागी संगै पठनिय शैलीमा सुधार होस भन्ने उद्देश्यले हामीले यस सम्बन्धी लेखक तथा साहित्यप्रेमीहरु संग गरिएको छोटो कुराकानी हामी एक्सप्रेस समाचार प्रकाशन गर्दैछौ । यसैको शिलशिलामा आजको अंकमा हुनुहुन्छ दोलखा घर भइ हाल राजधानी काठमाण्डौ बस्दै आउनुभएका गजलकार नारायण काइलो । उहाँसंग हाम्रा सहकर्मी अबिनास थापाले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
प्रश्न – तपाई आफ्नो परिचय कसरी दिनुहुन्छ
म नारायण काँईलो ,घर दोलखा हाल काठमाडौं ,विशेष गजल लेख्छु।
प्रश्न – तपाई किताव पढ्नमा कतिको रुची राख्नुहुन्छ ?
रुचि त राख्छु तर पछिल्लो समय निस्केका पुस्तकले अलि मन सन्तुष्ट हुन्न नसकेका कारण छानेर पढ्ने गर्छु । बजारमा जुन पुस्तक बढि चर्चामा आयो त्यो पुस्तक पढ्दिन म अलि फरक छु यस कुरामा।
प्रश्न – तपाई पढ्नुभएको पछिल्लो पुस्तक कुन हो ?
पछिल्लो समय पढेको शैलेन्द्र अधिकारीको निर्वेद हो।
प्रश्न – यो पुस्तक कुन आधारमा छान्नुभयो ?
सर्वप्रथम म लेखक पढ्छु र उसका विचार बुझ्छु र सजिलै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ लेखकको बौद्धिक क्षमता । विमोचन हुनु भन्दा पहिला लेखक संग मेरो वार्तालाप हुँदा नै उहाँको क्षमता र लगनशीलताले मलाई लोभ्याएको कारण पढेको हुँ।
प्रश्न – पुस्तकका कस्ता बिषयले छुन्छन तपाईलाई ?
कस्ता बिषयले छुन्छन भन्ने कुरा नै हुन्न भन्ने लाग्छ परिस्थिति अनुसार जिवनमा कस्तो भोगाई भोगिँदै छ ठ्याक्कै त्यस्तै पुस्तकले मान्छेलाई छुन्छ नै म प्रात्र बनेर लेखेका प्राय पुस्तकले मलाई छुन्छ सायद सबैलाई छुन्छ पनि होला किनकि जिवनमा कतै न कतै केही कुरा मिल्छ नै।
प्रश्न – पछिल्लो पुस्तकलाई तपाईले १० पुर्णाकंमा कति दिनुहुन्छ?
निर्णायक बन्न बहुत कठिन हुन्छ म त्यो लायक छैन । मैले यति नै अंक भन्न सक्ने अवस्था छैन मलाई मन परेको कुरा अरुलाई मन नपर्न सक्छ । मलाई चै बजारमा आएका मध्य फरक कथा बस्तु भएको पुस्तक भएको कारण मन पर्यो तसर्थ यो भारी काम मलाई नबोकाउनु होला।
प्रश्न – पुस्तकको कमजोर पक्ष के लाग्यो के सुधार्नु पर्ला ?
सत प्रतिशत सफल कोहि हुदैन सबैका कतै न कतै कमजोरी हुन्छन् नै ।म एक पाठक हुँ ,हुनत पाठकको काम लेखकका कमजोरी पक्ष अौल्याउनु धर्म हो कतै न कतै त लेखक चुक्छन नै तर पनि पहिलो आख्यान कृति भएका कारण अलिअलि कमजोरी छन् तिनलाई म कमजोरी ठान्दिन अर्को कृति आएँछ भने भन्ने छु।
प्रश्न-तपाईसंगको कुराकानी पढ्दै गरेका पाठकलाई कस्ता पुस्तक पढ्न सिफारिस गर्नुहुन्छ ?
पाठकको रोजाइको कुरा हो कस्तो पुस्तक पढ्ने भन्ने त।तर पनि पछिल्लो समय हामी साथिभाइले निकाल्यो किनेर पढ्दिउ न त भन्ने खाले भावनाले नेपाली साहित्यमा अलि नकारात्मक असर परेको छ । हाम्रो भन्दा पनि राम्रो पुस्तक छानेर पढौ भन्ने लाग्छ मलाई ।
र यो पनि हेर्नुस – एलिसा एकलासको कविता – भाेक
← यि हुन १० वटा विश्वका अग्ला भवनहरु (तस्बिरसहित)
साहित्य साधना हो – गजलकार भरत प्रमोद दाहाल →
कविता : हजारौँ हातको हस्ताक्षर-मनोज बिश्वकर्मा
कोरोनाबाट विश्वभर एक लाख ९१ हजार बढीको मृत्यु